Farta joomatari ee ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Farta joomatari ee ugu fiican
Mid ka mid ah go'aamada aasaasiga ah marka la wajahayo mashruuca waa in la doorto far ku habboon naqshadaas. Mid kasta oo ka mid ah qoraallada aan ku aragno hareerahayaga waxaa loo abuuray shaqo gaar ah sidaas darteed, ma habboona in la doorto midna. Waxaynu hore u naqaannaa noocyada far waaweyn ee jira oo u qaybsan afar kooxood: serif, sans serif, script ama buug iyo qurxinta.
Hadda, waxay yihiin magacyo badan oo ay ka go'an tahay inay isticmaalaan xarfaha joomatari si loo abuuro sawirka fudud iyo nadaafadda. Maqaalkan, waxaanu ku ogaan doonaa waxa ka dambeeya farimahan joomatari waxaana aanu samayn doonaa doorasho, taas oo aadan ku dhaafi karin buug-gacmeedkaaga.
1 kala soocidda qoraalka
1.1 Serif ama serif typography
1.2 Sans serif ama sans serif typography
1.3 Qoraal ama far-gacmeed
2 Waa maxay xarfaha joomatari?
3 Farta joomatari ee ugu fiican
3.4 Qarniga Gothic
3.9 Pro Wax
Xarfaha waxaa loo habayn karaa siyaabo kala duwan, laakiin xaaladdan waxaan diiradda saaraynaa jirkooda, markaa waxaan u kala qaybin doonaa afar kooxood oo aan isku arki doono; nooca serif, sans serif teeb, far qoraal ah iyo far qurxinta.
Kahor intaadan si buuxda u gelin xarfaha joomatari, waa inaad ogaataa waxa ay yihiin kooxaha waaweyn si aad u kala soocdo far ka mid kale.
Serif ama serif typography
Cunsurka lagu garto kooxdan wax-ku-qorista waa isticmaalka serif ee jilayaashaaga. Noocyada noocaan ah waxay asal ahaan ka soo jeedaan xaradhka ugu horreeya ee dhagaxa, tan iyo markii xaraashkan loo isticmaalay in si fudud loo dhammeeyo xarfaha birta.
Waxay ugu horreyntii loogu talagalay in loo isticmaalo baloogyo dhaadheer oo qoraal ah, maadaama wejigani uu ka caawinayo in uu akhriyo dhakhso, iyada oo ay ku mahadsan tahay xaraashka ay leedahay, taas oo ah tan u riyaaqday akhriskeeda.
Sans serif ama sans serif typography
Nooca noocaan ah waxaa ka maqan serifs, jilayaashiisu waa toosan yihiin oo istaroog labis ah. Xaaladdan oo kale, markii ugu horeysay ee ay ka muuqdaan taariikhda waxay ku jiraan marxaladda kacaanka warshadaha, oo lagu dhejiyay boodhadhka.
Isticmaalkeeda ugu weyn waa qoraallada gaagaaban, maadaama uu yahay far-qore ka maqan serif, kuma habboona akhrinta qoraallada cufan.
Waxa kale oo lagu magacaabi karaa cursive, waxay caan ku yihiin dhinacooda gacanta, kuwaas oo ku daydo far qoraal. Wajiga noocaan ah wuxuu badiyaa isticmaala seedaha ama qurxinta marka xarfaha lagu biirayo.
Shaqadeeda ugu weyni waa in loo isticmaalo saxiixyada ama weedhaha gaagaaban, sida cinwaanka cutubka buug, maadaama ay tahay qoraal qoraal ah oo aan la aqbali karin.
Marka aan ogaanno kooxaha noocyada kala duwan ee qoraallada loo kala saaray, waa in aan ogaanno kuwa ay ku jiraan far-shaxanka joomatari.
Waa maxay xarfaha joomatari?
Sidaan soo aragnay, kala soociddan qoraal-qoraalkan waxay u shaqeysaa sidii nidaam aqoonsi muuqaal ah, Il kastaa waxay leedahay astaamo u gaar ah.. Waxyaabahan gaarka ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu xusho farta saxda ah ee shaqo kasta, iyadoo la eegayo, lafo-guraynayo lana kala saarayo.
Farta joometeriga ah waxaa laga dhex helay farta sans serif ama sans serif. Yacni, waa qoraalo aan xaraash la'aan ama badhaadhe. Waxaa lagu gartaa khadadka fudud oo nadiif ah.
Waa nooc sans-serif ah, laga dhisay qaababka joomatari, istaroog isku mid ah ayaa loo isticmaalaa si loo abuuro jilayaal badan intii suurtagal ah, farqiga u dhexeeya mid kasta oo iyaga ka mid ah waa mid aad u yar
Marka xigta waxaan ka hadli doonaa oo ku saabsan xarfaha joomatari ee ugu fiican waxaad ka heli kartaa si aad naqshadahaaga u gaarsiiso heerka ugu sarreeya.
Daabacaadda waxaa dhiirigeliyay astaanta uu naqshadeeye Herb Lubalin u sameeyay Avant Garde Magazine 1967-kii, ka dibna dib ayaa loo qaabayn doonaa isaga iyo qoraaga Tom Carnase.
Waa qoraal joomatari, oo lagu dhisay goobo iyo xariiqyo toosan. Iyada oo dhererka X la taaban karo, kaas oo siinaya muuqaal adag oo casri ah.
Nooca Sans serif oo uu naqshadeeyay Paul Renner sanadkii 1927. Waxaa loo tixgaliyay far casri ah iyo shay ka tarjumaya avant-garde Yurub. Waxaa dhiirigeliyay qaabka joomatari ee Bauhaus, fudud, casri ah oo shaqeynaya.
Nooca Futura waa la adeegsadaa istaroogyo ballaaran oo meesha looga saarayo farqiga u dhexeeya xarafkiisa, marka lagu daro qaababka joomatari ee aasaasiga ah. Sifada fartan ayaa ah in kuwa fuula iyo kuwa ka soo degaya xuruufteeda yar ay ka dheer yihiin kuwa xarfaha waaweyn.
Joometric typography, kaas oo aan ku ilaalin karno isku darka qaabab wareeg ah oo leh xariijimo toosan iyo khadadka gaaban, waxaa dhiirigeliyay Mustaqbalka. Farta Pantra waxay leedahay afar dhumuc oo kala duwan oo ay kaga shaqeeyaan qoraaladeena.
Wajigan joometeriga ah waxa uu ku dhashay mahaddii aasaaska Monotype, ee ku salaysan farta qarniga labaatanaad ee Sol Hess, oo la sameeyay intii u dhaxaysay 1937 iyo 1947, ee Monotype Lanston raadinaya qaab la mid ah Futura, laakiin leh dhererka X sare iyo wax ka beddelka xarfaha si loo horumariyo tarankeeda warbaahinta dhijitaalka ah.
Qarniga Gothic waa nooc qoraal ah oo aan wax isbeddel ah ku yeelan dhumucda istaroogga. Mid ka mid ah sifooyinka uu kaga duwan yahay ilo kale ayaa ah xarafka G oo xarfo hoose ah iyo la'aanta gees soo degaya ee far yar oo U.
Sannadkii 1925kii, Walter Gropius waxa uu u xilsaaray naqshadaynta a typography si loogu isticmaalo dhammaan isgaarsiinta dugsiga Bauhaus. Herbert Bayer, naqshadeeyaha wuxuu ku fekeray dabeecad caalami ah, joomatari aan serif lahayn.
Dabeecaddan caalamiga ah, sida wakhtigaas loogu yeero, ayaa dhowr dib-u-qaabayn lagu sameeyay taariikhda oo dhan ilaa 1975-kii, markaasoo Victor Caruso uu weheliyo Ed Benguiat ayaa abuuray nooca ITC Bauhaus.
Gilroy waa a joomatari typography oo leh fursado badan, waxa uu leeyahay 20 miisaan oo kala duwan iyo ilaa 10 nooc oo far-talic ah, iyo sidoo kale jilayaasha luqadaha kale, sida Cyrillic. Waxay leedahay laba miisaan, khafiif ah oo dheeraad ah si ay ugu shaqeyso.
Naqshadeeye sans serif oo leh qaab joomatari nooca wejiga ah, in kasta oo ay jiraan kuwa sheegaya in ay sidoo kale ka mid noqon karto qoraalka aadanaha sababo la xiriira astaamo. Waxaa naqshadeeyay Adrian Frutiger 1988-kii.
Mustaqbalku wuxuu ahaa a typography oo si weyn loo isticmaalo marka la abuurayo summada shirkadaha mar haddii ay tahay far la akhriyi karo oo wax badan ka beddeli karta.
Wajiga noocaan ah waxa uu ka dhashay gacmaha naqshadeeyaha caanka ah ee Neville Brody. Waxaa markii hore loogu talagalay mastarka majaladda Arena 1986-kii, waxaana sii daayay Linotype 1989-kii sidii far-qoris. calaamad taagan oo lagu dhisay foomamka joomatari ee aasaasiga ah, taas oo muujinaysa saamaynta cad ee Nooca Cusub ee Bauhaus.
Calaamada naqshadayntaada, isku daraa xarfaha wareegsan, iyo kuwo kale oo toosan oo biyo leh, kaas oo ka sooca fardaha kale.
typography leh xariiqyo yar oo furan oo is haysta, waxay ka tirsan tahay qoyska Cera Collection typography, kaas oo aan ka helno, Cera Stencil, Cera Condensed, Cera Brush iyo Cera Round, waa qoys daboolaya dhammaan noocyada suurtagalka ah.
Qaababka joomatari waa aan waqti lahayn oo la taaban karoWaxay yihiin ikhtiyaar caan ah oo loogu talagalay naqshadaha astaanta astaanta, baakadaha, iwm. Waxay yihiin far fudud, xarrago leh oo leh laqabsi weyn, maadaama farta joometeriga ah loo isticmaali karo mashruucyo badan.
Haddii aad raadineysay farta joomatari, qoraalkan waxaan kuugu dhaafnay mid xulashada kuwa ugu fiican, u fiirso iyaga oo bilow inaad u isticmaasho naqshadahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Farta joomatari ee ugu fiican
Sida loo sameeyo faylka SVG